I-BLUCHER VS. DERBY: YONKE INTO EKUFUNEKA UYAZI - UHLOBO
I-Blucher vs. Derby: Yonke into ekufuneka uyazi
Izihlangu zokunxiba zinokubonakala ngokufanayo, kodwa kukho okunene iintlobo ezahlukeneyo zezitayile xa kufikwa kwizihlangu ezikrelekrele eziqhelekileyo, ezisesikweni, kunye nezihlandlo ezisesikweni. Ngelixa kusenokwenzeka ukuba uvile nge-Oxfords kunye nebrogues, zikhona ezinye iindlela ezimbalwa ezifanayo ezahluka kancinane kwezi zitayile sele zichaziwe - isihlangu seDerby nesihlangu se-blucher.
Ekuboneni kokuqala, awunakuwubona umohluko ocashileyo phakathi kweOxford, izihlangu zeDerby, kunye nezihlangu zeblucher; Nangona kunjalo, silapha ukuze sichaze yonke into ekufuneka uyazi malunga nezicathulo zeDerby kunye neeblucher, ukuba zahluke njani omnye komnye (kunye neOxfords), indlela yokuyinxiba, indawo yokunxiba kuyo, kunye nokunye. Funda kuyo yonke into oyifunayo malunga nezi ndlela zihlala zihlukile izihlangu zokunxiba .
Yintoni isihlangu seDerby?
Isihlangu seDerby sisihlangu esinxiba kakhulu esifana ne-Oxford kodwa sahluke kancinane ngenxa yenkqubo ye-lacing. Ngelixa iOxfords inenkqubo evaliweyo yokufaka umtya, izihlangu ze-derby zinenkqubo evaliweyo yokufaka umtya, oko kuthetha ukuba ulungelelwaniso luguquke ngakumbi, njengoko unokuqinisa okanye uzikhulule izihlangu ngokulula.
Izicathulo zeDerby zikwabeka iikota ezimbini (eziqala kufutshane nomphezulu wonyawo kwaye zijikeleze isithende) ezithungelweyo kunye - kulapho kuthungelwe khona imilebe yenkqubo evaliweyo yokuhlangana kwaye idibana nevamp (icandelo elingaphezulu eligubungeleyo umphambili wonyawo) ngolwimi. Ziza ngeendlela ezahlukeneyo kunye nobukhulu kwaye ngamanye amaxesha zibizwa ngokuba zizihlangu zaseGibson.
Yintoni isihlangu seBlucher?
Isihlangu se-blucher luhlobo lwembadada yokunxiba efana kakhulu nesihlangu seDerby, njengoko inenkqubo yokuvula evulekileyo kunye neziqwenga zesikhumba ezithungelwe kwi-vamp ukwenza inkqubo ye-lacing. Izicathulo zeBlucher ziza zinemibala eyahlukeneyo kunye nezixhobo kwaye zihlala zihlukile-ngokungafaniyo nakwisihlangu seDerby, nangona amagama athi Derby kunye neblucher aqhele ukusetyenziswa ngokungafaniyo.
iiTattoos ezincinci ezimnyama nezimhlophe
Nguwuphi umahluko ophambili phakathi kweDerby Shoe kunye neBlucher Shoe?
Kukho umahluko ophambili phakathi kwezicathulo zeDerby kunye nezihlangu zeblucher, kwaye inento yokwenza nolwakhiwo lwazo. Izicathulo zeDerby zineekota ezimbini (iinxalenye eziqala kwi-vamp kwaye zisongele esithendeni sesihlangu), kunye neeletshi zenkqubo evulekileyo yokuthunga zithungelwe kwikota. Izicathulo zeBlucher zineziqwenga zesikhumba ezithungelwe kwi-vamp ukwenza inkqubo yokuvula evulekileyo, kwaye umphezulu wayo unqunyiwe kwisikhumba esinye.
Izicathulo zeDerby ziza ngeendlela ezahlukeneyo, ezinjenge-wingtip, i-plain, kunye ne-cap toe. Inkqubo ye- Iphiko lephiko leDerby Ngokwesiqhelo inesiciko senzwane esalathiweyo esimile njenge-U, W, okanye M, isiciko sesithende, kwaye ihlala ine-brogging-okanye imingxunya ebunjiweyo yomhombiso-kuso sonke isihlangu. Izicathulo ze-cap toe derby zinakho okanye zingabinakho ukugquma kunye / okanye ikepusi yesithende, kunye nezihlangu ezicacileyo ze-derby-ezona zisemthethweni kwiqela - zihlala zingenayo inzwane okanye isithende esithendeni kwaye kungekho brogging.
Bona ngakumbi malunga - I-Oxfords vs Brogues: Yonke into ekufuneka uyazi
Ungazenza njani iZitayile zeDerby
Izicathulo zeDerby lukhetho oluhle kakhulu xa kuziwa ekudibaniseni ukugqitywa kwengubo efanelekileyo Ishishini eliqhelekileyo , isigxina, okanye isiganeko esisemthethweni. Nangona kunjalo, ayizizo zonke izihlangu zeDerby ezenziwe ngokulinganayo, kwaye kukho imigaqo embalwa ekufuneka ilandelwe xa kufikwa kumba wokuyinxiba kwimeko efanelekileyo. Ezi ndidi zintathu ziphambili zezihlangu zeDerby, ezichazwe ngokufutshane apha ngasentla, zinokwahluka kancinci, kodwa zanele ukwenza umahluko omkhulu.
Masiqale ngesona sisemthethweni, isihlangu esicacileyo seDerby. Ezi zihlangu zilungele ukunxiba umtshato osesikweni, ukuya kumnyhadala wasebusuku kunye nokunxiba okusesikweni, njenge-opera, indawo yemidlalo yeqonga, okanye ibhaleyi, okanye ukudibana kuseto lobuchwephesha, kuxhomekeke kwicandelo lakho lomsebenzi. Ezi zihlangu zihlala zimnyama, kodwa ungazifumana kweminye imibala ngokunjalo. Ukuba ufuna ukubukeka okuhle, okuncinci, zama ukudibanisa mnyama Izicathulo zikaHugo Boss Derby ngesuti yakho emnyama ekulungeleyo, kunye neqhosha elimnyama ezantsi ngaphantsi kobuhle obungenamandla.
ukakayi kunye neentyatyambo emkhonweni weentyatyambo
Izicathulo zeWingtip Derby zithathwa njengezona zisemthethweni, ngenxa yoko unganxiba ezi ntsana nakweyiphi na imeko yesiqhelo, engaqhelekanga, okanye eyeshishini. Ungazifumana kwizixhobo ezahlukeneyo ezinje ngesikhumba kunye ne-suede, kunye nemibala eyahlukeneyo kunye neepateni ezi-brogging, ngoko ke akuyi kuba nzima ukufumana isibini esivumelana nesitayile sakho. Zama ukudibanisa IClyde Hill iWingtip Derby eWalnut kunye ne-navy chinos, idyasi yezemidlalo ye-navy, kunye ne-tee emhlophe emhlophe yokujonga okuhambelana ngokugqibeleleyo kunye nobunkunkqele ngelixa uhlala kwi-trend.
Incam ye ncam yeenzwane iwela kanye embindini wethafa kunye ne-wingtip eDerby kwisikali kwaye ilungele ukubeka ndawonye isinxibo esifunekayo kumnyhadala okanye isiganeko esisesikweni. Ukuba indawo yakho yokusebenzela ifuna ikhowudi yokunxiba esesikweni, zama i Ukuhlaselwa kukaNorman Cap-Toe e-Bordeaux ibhangqwe ngeebhulukhwe ezingwevu ezingwevu kunye neblazer ephathekileyo engwevu, ukubukeka kobungcali.
Ungazenza njani iZimbo zeBlucher Shoes
Iindaba ezimnandi malunga nezicathulo ze-blucher kukuba ungazibeka kwisitayile esichazwe apha ngasentla, njengoko zisebenza kuzo zonke iimeko eziqhelekileyo, ezisesikweni nezisesikweni. Isitshixo apha, nangona kunjalo, kukujonga izinto kunye nokugqitywa kwezihlangu zeblucher. Ukuba banesikhumba esimnyama okanye benziwe nge-suede, gcina ezo zinxibo ukuba zinxibe izihlandlo ezingaqhelekanga-cinga i-brunch, i-BBQ, umhla (ukuba useto alukho semthethweni), njl.
Isibini esifana ne- I-Highlander Men's Pebble Grain Shoe yezihlangu ixhaphake ngokumangalisayo - dibanisa 'em kunye nesibini se-chinos kumbala owukhethileyo kwaye ugqibe ukujonga kwakho ngeqhosha eliprintiweyo phantsi kwehempe emfutshane enemikhono yokujija ulonwabo kwimpahla yempelaveki.Ngamaxesha amiselweyo, khetha into efana ne- I-Kenilworth Plain-Toe Blucher eBrown , enokubonakala ingakholeleki nge-suit ye-oxblood enamaqhosha amabini okanye isuti ye-navy yeklasikhi eneqhosha elimhlophe eliphantsi ngaphantsi.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba kukho iminyhadala kunye nezihlandlo apho unganxibi izihlangu zeDerby okanye izihlangu zeblucher, ezimele ukuzichaza. Musa ukunxiba ezi zitayile kwindawo yokuzivocavoca, ukwenza imisebenzi, ukwenza nantoni na onokuyenza kwiziteki kunye neebhulukhwe, njl. izihlangu ezithile zolo hlobo lokunxiba okusesikweni.
Bona ngakumbi malunga - Ingubo yezemidlalo vs iBlazer: Yonke into ekufuneka uyazi
Ukuthandaza izandla nge tattoo rose
Iphupha elibi ngaphambi komkhono wekrismesi
izimvo ezizodwa ze tattoo ezinentsingiselo
Izimvo ezilula zekhonkrithi yoyilo
Imibuzo engama-20 kwintombazana
gubungela umvambo wentliziyo